Wararka - Fepdon Kiiska Caafimaadka ee Wada Shaqaynta guuleysta
Kiiska Iskaashiga Caafimaadka ee Fepdon
Dhismaha dhismaha ee Xinhua Pediatric Hospital oo kuxiran Kuliyada Caafimaadka ee Jaamacadda Shanghai Jiaotong
Dhismaha isku-dhafan ee carruurta ee No. 28 ee Isbitaalka Xinhua ee ku xiran Kuliyadda Caafimaadka ee Jaamacadda Shanghai Jiaotong ayaa dhawaan la howlgelin doonaa. Dhakhaatiirta carruurta, qalliinka carruurta, bukaan-socodka iyo howlaha degdegga ah, iyo dhakhaatiirta carruurta, qeybaha xarunta wadnaha ee carruurta iyo qeybaha daryeelka degdegga ah dhammaantood ayaa loo wareejin doonaa si loo siiyo adeeg caafimaad oo tayo sare leh carruurta.
Kooxaheenu waxay u qoondeeyeen in ka badan 1 sano inay dhammaystiraan mashruuca oo dhan Isbitaalka carruurta ee Xinhua.
XARUNTA XANUUNKA BADAN EE BIRIDKA CAAFIMAADKA
QALABKA NOLOSHA OXYGEN
SOO SAARKA SOO SAARKA BADBAADADA XAALADAN
Daryeelka degdegga ah qalabka buundada ee ku xirnaanta caafimaadka
Naqshadeynta bini-aadamka: terminaalka korantadu waa fududahay in la furo oo laga furo, xagalka furku waa 30 digrii, wuxuu daboolaa astaamaha jirka aadanaha. Qalabka gaaska iyo korontada ayaa dhulka ka sarreeya 1.7-1.8 mitir. Dhererkani aad ayuu ugu habboon yahay aadanaha. Qalabku waa sahlan yahay in lagu meeleeyo. Jirka ayaa si xur ah loo dhajin karaa. The 340 ° saxaarad wareega ah ee dhererka hagaajin karo. nalalkuna waxaa si gaar ah loogu talagalay baahiyaha akhriska ee bukaanka; Buundooyinka xirmooyinka ICU waxay sidoo kale leeyihiin nalalka iftiinka daarta, jawiga dhagxaanta xiran ee isku dhafan, taasoo fududeyneysa in la nadiifiyo.
Dammaanad-qaadista-afar jeer oo xamuul ah: Waxaa loogu talagalay iyada oo ku saleysan afar jeer oo la saaro culeyska nabadgelyada. Qaybta biriijka ee ganaaxa isku-uruurinta qaybaha, qalabka buundada ka-hakinku waxay xaqiijin kartaa in munaaradda ganaaxu ay tahay mid ammaan ah oo lagu kalsoonaan karo.
Xirmooyinka cirbadeynta cirbadda cirbadda laga soo dhoofiyo Jarmalka ayaa leh awood xamuul oo sarreeya, waxay xaqiijin kartaa in baahida xamuulka ee buundada ganaaxa ay tahay mid ammaan ah, taasoo ka dhigeysa buundada suunka isku bedbedesha si fudud oo deggan.
Qalabka buundada ee salka ku haya qalabka caafimaadka ayaa adeegsaday nooca Trumpf.Waa muuqaallo cabbirkoodu aad u yar yahay laakiin aad u adag, oo leh farsamo yari yar, uma baahna in la nadiifiyo.
Waqtiga boostada: Oct-13-2020